Barcelona oo kula tartameysa Chelsea saxiixa goolhayaha Kooxda Ajax ee Andre Onana – Gool FM
Barcelona oo kula tartameysa Chelsea saxiixa goolhayaha Kooxda Ajax ee Andre Onana
(Barcelona) 22 Feb 2020. Goolhayaha Ajax ee Andre Onana ayaa lagu soo waramayaa inuu u muuqdo mid bartilmaameed u ah Kooxda kubadda cagta Barcelona.
Kooxda reer Catalonia ayaa waxay u baahan tahay inay soo qaadato goolhayan cajiibka ah ee Onana, waxayna rabta inay tartan adag la galiso goolhayeyaasha kala ah; Marc-Andre ter Stegen iyo Neto kuwaasoo iminka jooga garooonka Camp Nou.
Kooxda haysata horyaalka La Liga ayaa waxay diiradda saareysaa si ay u soo celiso qaab ciyaareedkeedii wanaagsanaa, inkastoo haatan kooxdan hoggaanka horyaalka looga hayo hal dhibcood oo qura.
Inkastoo loo tixgaliyo inuu yahay mid ka mid ah ragga furaha u ah Ajax, xiddiga heerka caalami ee dalka Cameroon ayaa la filayaa inuu u dhaqaaqo koox wayn marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
23-sano jirkaan ayaa waqti ku qaatay akadeemiyada kooxda Barcelona ka hor inta uusan u dhaqaaqin Ajax sanadkii 2015-kii.
Chelsea ayaa sidoo kale la sheegayaa inay isha ku hayaan xaaladda, maadaama la warinayey inay raadinayaan bedelka Kepa Arrizabalaga.
Si kastaba ha noqotee, xiddigan ayaa kooxda reer Holland ee Ajax waxa uu u saftay 116 kulan tartammada oo dhan.
Horudhac: Levante vs Real Madrid … (Kooxda Los Blancos oo doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato)
Saakay iyo Waxyaabihii ay Wargeysyadu ka qoreen Suuqa kala iibsiga… (Sterling, Onana, Silva & Kuwo kale)